ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမှာရှိတဲ့ ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းလေးရဲ့ သင်တန်းချိန်၊ဝန်ဆောင်မှုနဲ့သင်တန်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
" ရန်ကုန်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ဖွင့်လှစ်သွားမယ့် အတန်း
သစ်များအတွက် ကျောင်းအပ် လက်ခံနေပါပြီ "
#Subject : N5 - Conversation (စကားပြော သီးသန့်တန်း)
• Class Date: Sat + Sun
• Class Time: 1 PM ~3PM
• Fees : 70000/-Ks ( Course အပြတ် + စာအုပ်ဖိုးပါဝင်ပြီး )
• Start Date: Feb 11, 2017
• Teacher : SAKAGAMI ( Native Speaker )
• Note: N-5 သင်ရိုးပြီးစီးအောင် သင်ယူဖူးသူ ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
July Intake ဂျပန်မှာ ကျောင်းတက်မယ့်သူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
#Subject : N5 – Conversation (စကားပြော သီးသန့်တန်း)
• Class Date: Mon + Tue + Thu + Fri
• Class Time:9AM ~ 11 AM
• Start Date: Feb 20, 2017
#Subject : N4 – Conversation (စကားပြော သီးသန့်တန်း)
• Class Time:4PM ~6PM
• Fees : 75000/-Ks ( Course အပြတ် + စာအုပ်ဖိုးပါဝင်ပြီး )
• Start Date: Feb 25, 2017
• Note: N-4 သင်ရိုးပြီးစီးအောင် သင်ယူဖူးသူ ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
#Subject : N5 (Basic) Special
• Class Time:4PM ~ 8 PM ( အားလပ်ချိန် မိနစ် 20 ပါဝင်သည် )
• Fees : 95000/-Ks ( Course အပြတ် + စာအုပ်ဖိုးပါဝင်ပြီး )
• Start Date: Feb 18, 2017
• Course Duration:4Months
• Teacher : Daw San Yu
• Note: ဂျပန်ဘာသာကို ယခုမှ စတင်လေ့လာမည့်သူများနှင့်
NAT TEST Exam, JLPT Exam (Mandalay) ဖြေဆိုလိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
• Subject : N5 (Basic) Special
• Class Time: 8:30 AM ~ 12 PM ( အားလပ်ချိန် မိနစ် 20 ပါဝင်သည် )
• Start Date: Feb 13, 2017
• Teacher : Daw Aye Aye Maw
• Class Time:3PM ~ 6:30 PM ( အားလပ်ချိန် မိနစ် 20 ပါဝင်သည် )
• Teacher : Daw Chit Thidar Nwe
• Subject : N5 (Basic) Regular
• Class Time: 1 PM ~ 3:30 PM
• Course Duration: 4.5 Months
• Note: ဂျပန်ဘာသာကို ယခုမှစတင်၍ လေ့လာလိုသူများနှင့်
NAT TEST Exam, ဖြေဆိုလိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
#Subject : N4 Special
• Class Time:2PM ~ 5:30 PM ( အားလပ်ချိန် မိနစ် 15 ပါဝင်သည် )
• Fees : 105000/-Ks ( Course အပြတ် + စာအုပ်ဖိုးပါဝင်ပြီး )
• Start Date: Mar 6, 2017
• Teacher : Daw Khin Su Su Lwin
• Note: ဂျပန်ဘာသာ N-5 (Basic) တက်ရောက်ပြီးသူများနှင့်
• Subject : N4 Special
• Class Time:9AM ~ 12:30 PM ( အားလပ်ချိန် မိနစ် 15 ပါဝင်သည် )
• Start Date: Feb 23, 2017
#Subject : N4 Practice
• Class Time: 1 PM ~ 2:30 PM
• Fees : 71000/-Ks ( Course အပြတ် + စာအုပ်ဖိုးပါဝင်ပြီး )
• Start Date: Feb 6, 2017
• Course Duration: 1.5 Months
• Note: ဂျပန်ဘာသာ N-4 တက်ရောက်ပြီးသူများနှင့် NAT TEST
Exam, JLPT Exam (Mandalay) ဖြေဆိုလိုသူများ တက်ရောက်နိုင်
အချိန်ဇယားကို သိမ်းဆည်းလိုပါက ဒီလင့်ကို သွားပါ >> https://www.facebook.com/yayaya.jpla.edu.centre/photos/a.214122582100815.1073741828.212902508889489/646041402242262/?type=3&theater
N-5 , N-4 တန်းများကို သင်ရိုးကုန်4- Skills လုံးသင်ကြား မှာဖြစ်ပြီး
Kanji တန်းသီးသန့် ပြန်တက်စရာ မလိုပဲ စာမေး ပွဲဖြေနိုင်အောင် Kanji
လုံးရေ အပြည့် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထိ Course အပြတ်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အတန်းအ
လိုက် ဖတ်စာအုပ်၊ လေ့ကျင့်ရေးစာရွက်၊ အကွက်စာအုပ်၊ ဗလာ စာအုပ်၊ ဘောပင်၊ ခဲတံ၊ ခဲဖျက် ပါမကျန် အပြီးအစီး ပါဝင် အောင် ဆောင် ရွက်ပေးထားပါတယ်။ ဖတ်စာအုပ် ကိုလည်း အများနှင့် မတူအောင် ယခင်ထက် အရေ အသွေးကောင်းမွန်စွာ ရိုက်နှိပ်ထားသည်များကို အသုံးပြု ထားပါတယ်။
ဖော်ပြထားသည့် အတန်းသစ်များကို တက်ရောက်လိုပါက အတန်း အပ်နှံခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါ၍ တက်ရောက်လိုသူများ အနေဖြင့် ကြိုတင် Register Fees ၁ သောင်းကျပ်ကြိုတင် ပေး
သွင်း၍ အပ်နှံထားနိုင်ပြီး ၊ သင်တန်းကြေးအပြည့် အ၀ ပေးသွင်း၍လည်း အပ်နှံထားနိုင်ပါပြီ။
(မှတ်ချက်။ ။ အမည်စာရင်းဖုန်းဖြင့်ပေးခြင်း၊ Online မှ ပေးခြင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်း အမှန်တကယ် သင်တန်း သို့လာရောက် အပ်နှံသူကိုသာ ဦးစားပေးရပါသည်။
လူစာရင်းပေးထားသော်လည်း အတန်း မအပ်ထားသည့် အတွက် သင်တန်းမတက်သူများ မကြာခဏရှိပါ သဖြင့် သင်တန်းအပ်ပေးမှသာ သေချာပါမည့်အကြောင်း
မေတ္တာ ရပ်ခံ သတိပေးအပ်ပါသည်)
သင်တန်းအပ်နှံရန် အတွက် (3×4cm ) အရွယ်၊ နောက်ခံ အပြာဖြင့်ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး ၊ သင်တန်းအပ် ဖောင်ဖြည့်ပေးရပါမယ်။
စုံစမ်း ဆက်သွယ်ရန် -
YA YA YA Japanese Language Academy & Education
Centre - (I), Yangon
🏫 No.(225), Room (3), Kyitekasan Rd, Tamwe Tsp, Yangon.
☎ 0949 290 164, 09731 735 84, 09 783 783 050,
09 783 783060,
🕗 ရုံးချိန် နေ့စဉ် 8 AM ~ 7:30 PM
⚠ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့9AM~5PM) နေ့စဉ် ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်ပါသည်။
Centre - (II), Mandalay
🏫 No.(97), 37th Street, Bt 76th × 77th St, Mahar Aung MyaeTsp,
☎ 09 791 999995, 09 792 999995, 09 793 999995.
⚠ ( အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ရုံးပိတ်ပါသည်။ )
Aavashare Mym 03/02/2017 at 07:51 PM
Thank you for this course informastion. When we learnanew language, we not only expand our career options, we also learnanew culture